ပနားမားကို အနိုင်ကစားပြီး နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ခွင့်ကို အရယူသွားဖို့ရှိနေတဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်
24 Jun 2018 . 5:35 PM
ဒီနေ့ညမှာတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (G)နဲ့ (H) က အသင်းတွေရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စု (G)က နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်အပါအဝင် ပွဲစဉ် (၃)ပွဲကို ကစားသွားကြမှာပါ။ အုပ်စု (G)မှာ ပါဝင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းတွေထဲမှာ အုပ်စုတွင်း အားအနည်းဆုံး ပြိုင်ဘက်အသင်းလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ပနားမားနဲ့ ရင်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်လို့ အပြန်အလှန် ထိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲရသကို ခံစားရဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ အုပ်စု (G)က နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ဖြစ်လာဖို့ မရှိပေမယ့် အုပ်စု (H) အသင်းတွေရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အပြည့်အဝ ပေးသွားဖို့ ရှိနေတယ်။ အုက်စု (H)မှာပါဝင်တဲ့ အသင်းတိုင်း မဖြစ်မနေ နိုင်ပွဲ ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေခဲ့လို့ အမိုက်စား ပွဲကောင်းတွေအဖြစ် ဘောလုံးပရိသတ်တွေ မြင်တွေ့သွားရဖို့ ရှိနေပါတယ် . . .
အင်္ဂလန် – ပနားမား (တနင်္ဂနွေ ည ၆း၃၀ နာရီ)
အင်္ဂလန်တို့က အုပ်စုပထမနေရာကို ရယူဖို့ အစွမ်းကုန် အားထုတ်လာဖို့ ရှိနေပေမယ့် ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲအတွက် လူချန် ကစားသွားမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ ပနားမားအသင်းကတော့ အင်္ဂလန်အသင်းကို အဖက်ဖက်က ယှဉ်ကစားနိုင်ဖို့ မရှိပါဘူး။ အနိုင်ယူဖို့ ဝေးပြီး သရေတစ်မှတ် ရယူဖို့တောင် ပနားမားအသင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ (၃-၅-၂) ကစားကွက်ကို နည်းပြဆောက်ဂိတ်ဒ် Southgate ပနားမားနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဆက်လက် အသုံးပြုလာမယ်ဆိုရင်တော့ တူနီးရှားနဲ့ ပွဲတုန်းကလိုပဲ ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်ရနိုင်တယ်။ (၃-၅-၂) ကစားကွက်မှာ အင်္ဂလန် ကစားသမားတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ကစားခဲ့ရလို့ ခြေစွမ်းပြဖို့ ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ တူနီးရှားနဲ့ ပွဲက အမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်မှုတွေကို နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ဒ် Southgate ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလန်ဂိုးပြတ် အနိုင်ရသွားဖို့တောင် ရှိနေတယ်။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုပွဲစဉ်မှာ အဖက်ဖက်က အသာရနေတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းကို သေချာပေါက် ရွေးချယ်သွားရမှာဖြစ်ပြီး ဂိုးပြတ် အနိုင်ရသွားဖို့ ရှိနေတယ်။
ဂျပန် – ဆီနီဂေါ (တနင်္ဂနွေ ည ၉း၃၀ နာရီ)
အုပ်စု (H)ရဲ့ အုပ်စုအဖွင့် ပွဲစဉ်တွေမှာ နိုင်ပွဲကိုယ်စီရယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ အခွင့်အရေးကို (၂)သင်းစလုံး ရရှိထားလို့ ဒီ (၂)သင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ အခုပွဲစဉ်က ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာဖို့ ရှိနေတယ်။ နိုင်တဲ့အသင်းက နောက်တစ်ဆင့်ကို သေချာပေါက် တက်ရောက်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရှုံးတဲ့အသင်းကတော့ ဖိအားသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ဒီအုပ်စုမှာ ပါဝင်တဲ့ အသင်းတွေရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းကလည်း တစ်သင်းနဲ့ တစ်သင်း ကွာခြားမှုမရှိလို့ ရှုံးပွဲကြုံတွေ့တဲ့အသင်းက အုပ်စုကနေတောင် လှည့်ပြန်သွားရနိုင်တယ်။ ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့် ဆီနီဂေါရော၊ ဂျပန်တို့ပါ အဓိက ကစားသမား အစုံအလင်နဲ့ အားကုန်ထုတ်လာဖို့ ရှိတယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရလည်း ဆီနီဂေါတို့ အသာရနေပြီး ကစားပုံမာကျောတဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ ဂျပန်တို့ ဒီပွဲမှာတော့ အလုပ်ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး။ သရေကျဖို့ များနေပြီး အနိုင်အတွက်ဆိုရင်တော့ တိုက်စစ် ကစားသမားကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆီနီဂေါကိုပဲ ရွေးချင်တယ်။
ပိုလန် – ကိုလံဘီယာ (တနင်္လာ နံနက် ၀၀း၃၀ နာရီ)
ရှုံးပွဲကိုယ်စီ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အသင်း (၂)သင်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လို့ ရှုံးနိမ့်တဲ့ အသင်းက အုပ်စုကနေ သေချာပေါက် လှည့်ပြန်ရမယ်။ ဒီလိုအနေအထားကို ကြုံတွေ့နေတဲ့ ပိုလန်နဲ့ ကိုလံဘီယာအသင်းတွေဟာ ပြိုင်ပွဲမစခင်က ဒီအုပ်စု ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် အသင်းတွေအဖြစ် တစ်ပေးခံထားရတဲ့ အသင်းတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ဒီ (၂)သင်းထဲက တစ်သင်းကတော့ အုပ်စုကနေ ထွက်ခွာရတော့မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ ဥရောပ ကလပ်အသင်းတွေမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသနေတဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားကိုယ်စီ (၂)သင်းစလုံးမှာ ပါဝင်နေပြီး ကစားသမား အင်အားပိုင်းလည်း ကွာခြားမှုမရှိလို့ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်မယ့် ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု (၅)ကြိမ်မှာ ကိုလံဘီယာက (၃)ကြိမ် အနိုင်ရထားပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ရပ်မှာတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမား အင်အားပိုင်း ကွာခြားမှုမရှိပေမယ့် ဂျပန်နဲ့ ပွဲက နည်းစနစ်ပိုင်းအမှားများခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာ နည်းပြ ပီကာမန် Pekerman ကြောင့် ပိုလန်အသင်းကိုပဲ အနိုင်အတွက် ရွေးချယ်ချင်တယ်။ အပြန်အလှန် သွင်းဂိုးတွေကို မြင်တွေ့ရဖို့ ရှိနေတယ်။
Photo:Sportsdroid, Today Betting Tips, YouTube
ပနားမားကို အနိုငျကစားပွီး နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျခှငျ့ကို အရယူသှားဖို့ရှိနတေဲ့ နာမညျကွီး အင်ျဂလနျ
ဒီနညေ့မှာတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အုပျစု (G)နဲ့ (H) က အသငျးတှရေဲ့ ပှဲစဉျတှကေို ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာဖွဈပွီး အုပျစု (G)က နာမညျကွီး အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျအပါအဝငျ ပှဲစဉျ (၃)ပှဲကို ကစားသှားကွမှာပါ။ အုပျစု (G)မှာ ပါဝငျတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ အသငျးတှထေဲမှာ အုပျစုတှငျး အားအနညျးဆုံး ပွိုငျဘကျအသငျးလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ ပနားမားနဲ့ ရငျဆိုငျသှားရမှာဖွဈလို့ အပွနျအလှနျ ထိုးဖောကျမှုတှနေဲ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲရသကို ခံစားရဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ အုပျစု (G)က နာမညျကွီး အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ ပှဲစဉျဟာ ပှဲကောငျးတဈပှဲ ဖွဈလာဖို့ မရှိပမေယျ့ အုပျစု (H) အသငျးတှရေဲ့ ပှဲစဉျတှကေတော့ စိတျလှုပျရှားမှုကို အပွညျ့အဝ ပေးသှားဖို့ ရှိနတေယျ။ အုကျစု (H)မှာပါဝငျတဲ့ အသငျးတိုငျး မဖွဈမနေ နိုငျပှဲ ရယူနိုငျဖို့ လိုအပျနခေဲ့လို့ အမိုကျစား ပှဲကောငျးတှအေဖွဈ ဘောလုံးပရိသတျတှေ မွငျတှသှေ့ားရဖို့ ရှိနပေါတယျ . . .
အင်ျဂလနျ – ပနားမား (တနင်ျဂနှေ ည ၆း၃၀ နာရီ)
အင်ျဂလနျတို့က အုပျစုပထမနရောကို ရယူဖို့ အစှမျးကုနျ အားထုတျလာဖို့ ရှိနပေမေယျ့ ဘယျလျဂြီယံနဲ့ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲအတှကျ လူခနျြ ကစားသှားမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ခွစေဈပှဲ အောငျမွငျလာခဲ့တာဖွဈတဲ့ ပနားမားအသငျးကတော့ အင်ျဂလနျအသငျးကို အဖကျဖကျက ယှဉျကစားနိုငျဖို့ မရှိပါဘူး။ အနိုငျယူဖို့ ဝေးပွီး သရတေဈမှတျ ရယူဖို့တောငျ ပနားမားအသငျး ခကျခကျခဲခဲ ရုနျးကနျရဖို့ရှိနတေယျ။ တဈခုရှိတာက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ (၃-၅-၂) ကစားကှကျကို နညျးပွဆောကျဂိတျဒျ Southgate ပနားမားနဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဆကျလကျ အသုံးပွုလာမယျဆိုရငျတော့ တူနီးရှားနဲ့ ပှဲတုနျးကလိုပဲ ဂိုးရဖို့ ရုနျးကနျရနိုငျတယျ။ (၃-၅-၂) ကစားကှကျမှာ အင်ျဂလနျ ကစားသမားတှေ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ နရောတှမှော ကစားခဲ့ရလို့ ခွစှေမျးပွဖို့ ရုနျးကနျနရေတယျ။ ဒီနပှေဲ့စဉျမှာ တူနီးရှားနဲ့ ပှဲက အမှားတှကေို သငျခနျးစာယူပွီး အကောငျးဆုံး ပွငျဆငျမှုတှကေို နညျးပွ ဆောကျဂိတျဒျ Southgate ပွုလုပျနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ အင်ျဂလနျဂိုးပွတျ အနိုငျရသှားဖို့တောငျ ရှိနတေယျ။ ဘယျလိုတှဖွေဈဖွဈပါ အခုပှဲစဉျမှာ အဖကျဖကျက အသာရနတေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးကို သခြောပေါကျ ရှေးခယျြသှားရမှာဖွဈပွီး ဂိုးပွတျ အနိုငျရသှားဖို့ ရှိနတေယျ။
ဂပြနျ – ဆီနီဂေါ (တနင်ျဂနှေ ည ၉း၃၀ နာရီ)
အုပျစု (H)ရဲ့ အုပျစုအဖှငျ့ ပှဲစဉျတှမှော နိုငျပှဲကိုယျစီရယူနိုငျခဲ့ပွီး နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျဖို့ အခှငျ့အရေးကို (၂)သငျးစလုံး ရရှိထားလို့ ဒီ (၂)သငျး ထိပျတိုကျတှဆေုံ့နတေဲ့ အခုပှဲစဉျက ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျလာဖို့ ရှိနတေယျ။ နိုငျတဲ့အသငျးက နောကျတဈဆငျ့ကို သခြောပေါကျ တကျရောကျခှငျ့ရမယျ့ အခှငျ့အရေးကောငျးတဈရပျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈပွီး ရှုံးတဲ့အသငျးကတော့ ဖိအားသကျရောကျမှုတှေ ရှိလာနိုငျတဲ့ အနအေထားဖွဈနတေယျ။ ဒီအုပျစုမှာ ပါဝငျတဲ့ အသငျးတှရေဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးကလညျး တဈသငျးနဲ့ တဈသငျး ကှာခွားမှုမရှိလို့ ရှုံးပှဲကွုံတှတေဲ့အသငျးက အုပျစုကနတေောငျ လှညျ့ပွနျသှားရနိုငျတယျ။ ဒီလိုအနအေထားတှကွေောငျ့ ဆီနီဂေါရော၊ ဂပြနျတို့ပါ အဓိက ကစားသမား အစုံအလငျနဲ့ အားကုနျထုတျလာဖို့ ရှိတယျ။ သမိုငျးမှတျတမျးတှအေရလညျး ဆီနီဂေါတို့ အသာရနပွေီး ကစားပုံမာကြောတဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ ဂပြနျတို့ ဒီပှဲမှာတော့ အလုပျဖွဈမယျ မထငျဘူး။ သရကေဖြို့ မြားနပွေီး အနိုငျအတှကျဆိုရငျတော့ တိုကျစဈ ကစားသမားကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆီနီဂေါကိုပဲ ရှေးခငျြတယျ။
ပိုလနျ – ကိုလံဘီယာ (တနင်ျလာ နံနကျ ၀၀း၃၀ နာရီ)
ရှုံးပှဲကိုယျစီ ကွုံတှခေဲ့တဲ့ အသငျး (၂)သငျး ထိပျတိုကျ တှဆေုံ့တဲ့ပှဲစဉျဖွဈလို့ ရှုံးနိမျ့တဲ့ အသငျးက အုပျစုကနေ သခြောပေါကျ လှညျ့ပွနျရမယျ။ ဒီလိုအနအေထားကို ကွုံတှနေ့တေဲ့ ပိုလနျနဲ့ ကိုလံဘီယာအသငျးတှဟော ပွိုငျပှဲမစခငျက ဒီအုပျစု ကြျောဖွတျနိုငျမယျ့ အသငျးတှအေဖွဈ တဈပေးခံထားရတဲ့ အသငျးတှပေါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲစဉျတှမှော ပွိုငျဘကျအသငျးတှကေို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ဒီ (၂)သငျးထဲက တဈသငျးကတော့ အုပျစုကနေ ထှကျခှာရတော့မှာ မွကွေီးလကျခတျမလှဲပါ။ ဥရောပ ကလပျအသငျးတှမှော ခွစှေမျးကောငျးတှေ ပွသနတေဲ့ နာမညျကြျော ကစားသမားကိုယျစီ (၂)သငျးစလုံးမှာ ပါဝငျနပွေီး ကစားသမား အငျအားပိုငျးလညျး ကှာခွားမှုမရှိလို့ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြတဈခုအတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျမယျ့ ပှဲတဈပှဲဆိုတာ အသအေခြာပါပဲ။ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှု (၅)ကွိမျမှာ ကိုလံဘီယာက (၃)ကွိမျ အနိုငျရထားပမေယျ့ ပွိုငျပှဲကွီးတဈရပျမှာတော့ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျကွမှာဖွဈပါတယျ။ ကစားသမား အငျအားပိုငျး ကှာခွားမှုမရှိပမေယျ့ ဂပြနျနဲ့ ပှဲက နညျးစနဈပိုငျးအမှားမြားခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာ နညျးပွ ပီကာမနျ Pekerman ကွောငျ့ ပိုလနျအသငျးကိုပဲ အနိုငျအတှကျ ရှေးခယျြခငျြတယျ။ အပွနျအလှနျ သှငျးဂိုးတှကေို မွငျတှရေ့ဖို့ ရှိနတေယျ။